अन्तर्राष्ट्रिय समाचार – Yuwa Aawaj
Jun112021 by Yuwa AawajNo Comments
ब्रेकिङ : मलेसियामा थप दुई साता लकडाउन ।
काठमाण्डौ : मलेसियाले लक'डाउनको समय थप दुई साता बढाउने निर्णय गरेको छ । मलेसियाले जुन १५ देखि २८ सम्म लक'डाउनको समय लम्ब्या'उने निर्णय गरेको हो । मलेसियाले यसअघि जुन १४ सम्मको लागि लक'डाउनको समय तोकेको थियो । लक'डाउनको समय थप भएसंगै जुन १४ देखि थप दुई साता मलेसियामा लक'डाउन हुँदैछ । शुक्रबार मलेसियाका सिनियर मन्त्री दातुक सेरी स्मैल साबरी याकोबले को'रोना सङ्क्र'मण दर नघटेको भन्दै अहिले कायम रहेको ल'कडाउन थप दुई हप्ता लम्ब्या'उने घोषणा गरेका हुन् । पछिल्लो समय मलेसियामा दैनिक पाँच हजारभन्दा धेरै सङ्क्र'मित थपिइरहेका छन् । बिहीबार मात्रै पनि मलेसियामा ६ हजार ८७१ जनामा को'रोना सं'क्रमित थपिएका छन् । -साझा सबाल
बधाई ! साइप्रसमा पहिलो महिला सभामुख चयन !
साइप्रसमा पहिलो पटक संसदबाट महिला सदस्य सभामुखमा चुनिनु भएको छ । सन् १९६० मा स्वतन्त्र भएको साइप्रसको दोस्रो सर्वाधिक शक्तिशाली पदमा अन्निटा डिमेट्रिओ चयान हुनु भएको छ । साइप्रसको कूल ५६ सदस्य रहेको संसदमा डिमेट्रिओले २५ मत प्राप्त गर्नु भएको थियो । सभामुखमा विजयी भएसँगै ३५ वर्षीया सांसद डिमेट्रिओले आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी पूर्ण निष्ठाका साथ पूरा गर्ने बताउँदै आफूले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने जानकारी दिनुभयो । साइप्रसका राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियाडेसले डिमेट्रिओ निर्वाचित भएकामा आफूलाई निकै खुशी लागेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपति पछि देशको सर्वाधिक शक्तिशाली राजनीतिक पदमा एक महिला चुनिनु देशकै लागि गर्वको विषय भएको बताउनुभयो ।डिमेट्रिओ मध्य–दक्षिणपन्थी डेमोक्रेटिक पार्टीबाट सांसद हुनु भएको थियो । राष्ट्रपति अनास्तासियाडेसले पनि यही पार्टीलाई धेरै वर्षसम्म नेतृत्व दिनु
विदेशमा अल-पत्र नेपालीको विजोग, सरकार भन्छः प्लेन नउडेसम्म उडाउन सकिदैन ।(भिडियो)
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको रे'मिट्यान्समा रमाउछ सरकार । तर उनीहरु अवस्था के छ भन्ने बारेमा भने कहिले ग'म्भीर बनेको पाइन्न । सरकारले आफुहरुलाई नहेरेको गुना'सो गरिरहेका उनीह'रुप्रति यो कोरोनाकालमा सरकार झनै उदासिन बनेको आरोप पनि वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको छ । विश्वलाई को'रोनाले आक्रा'न्त पारेपछि धेरैले रोजगारी गुमा'उँदा ठूलो संख्यामा नेपालीहरु घर फर्किए । कोरो'नाको पहिलो चरणमा सरकारले नै बिभिन्न चरणमा उद्दार गरेर डेढ लाख बढी नेपाली नागरिकलाई विदेशबाट फर्कायो । तर यसरी फर्कि'एकाहरु धेरै दिन देशभित्र टिक्न र रम्न सकेनन् । कारण यहाँ दोहोरिने उही बेरोजगारीको नियति । को'रोनाको दोस्रो चरण सुरु हुन दैनिक सातसयसम्म नेपाली नागरिक विदेशिएका थिए । तर कोरो'नाको दो\_स्रो लहर सुरु भएपछि जारी गरिएको निषे'धाज्ञाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाइएको प्रतिबन्धले उड्न चाहनेहरु रोकिएका छ
खोप अभियान सुरु गरेको ६ महिना नबित्दै विश्वकै पहिलो ‘मास्क फ्रि’ देश घोषणा !
काठमाडौं : खोप अभियान सुरु गरेको ६ महिना पनि पूरा नहुँदै इजरायलले आफूलाई विश्वकै पहिलो मास्क फ्रि देश घोषणा गरेको छ । बाहिर मास्क लगाउन अनिवार्य प्रावधान यसअघि नै हटाइसकेको इजरायलले यही जून १५ देखि बन्द ठाउँमा अर्थात इनडोरमा पनि मास्क लगाउन नपर्ने व्यवस्था गर्दैछ । यससँगै इजरायल विश्वकै पहिलो मास्क फ्रि देश हुनेछ । इजरायलका स्वासथ्य मन्त्री युलि एडलस्टिनले १५ जूनदेखि बन्द स्थानमा पनि मास्क लगाउन नपर्ने घोषणा गरेको टाइम्स अफ इजरायलले जनाएको छ । इजरायलले १९ डिसेम्बरमा खोप अभियान सुरु गरेको थियो । इजरायलमा पहिलो खोप प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले लगाएका थिए । इजरायलको खोप अभियान सुरु भएको जून १९ मा ६ महिना पूरा हुँदैछ । तर, ६ महिना पुग्नु ४ दिन अगावै इजरायलले आफूलाई मास्क फ्रि देश घोषणा गर्दैछ । स्वास्थ्य मन्त्री एडलस्टिनले भने ‘यदि अगाडि संक्रमण धेरै बढेन भने प्रतिबन्ध पूण
Jun92021 by Yuwa AawajNo Comments
मलेसियामा १ सय ५६ विदेशी श्रमिकको शरिरमा किट’नाशक औ’षधि छर्किईयो ।
काठमाडौं : मलेसियामा अवैधा'निक रुपमा बस्दै आएको अभियोगमा प'क्राउ परेका विदेशी श्रमिकको शरिरमा अध्यागमनका अधिकारीहरुले कि'टनाशक औ'षधि छ'र्किएपछि दुईजना सांसदले त्यसको विरो'ध गरेका छन् । उनीहरुले सम्वन्धित जिम्मे'वार निकायल यसको जवाफ दिनु पर्ने भन्दै यसलाई अमान'विय तथा आ'त्मसम्मानमा आँच आउने काम भन्दै निन्दा गरेका छन् । अवै'धानिक रुपमा बस्दै आएको अभि'योगमा प'क्राउ परेका विदेशी श्रमिकहरुको टाउको,हात लगायत शरिरमा कि'टनाशक औ'षधि छर्किएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि सांसद डा. केल्भिन यीले त्यसो गर्नुको कारण मागेका छन् । उनीहरुलाई ठूलो समुहमा भुईमा बसाएर त्यसरी किट'नाशक औ'षधि छ'र्किइएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यदि कसैलाई उनीहरुले किट'नाशक औष'धि छर्किन्छन् भनें उनीहरुलाई समान व्यवहार गरिनु पर्दछ, चाहे ति विदेशी श्रमिक हुन् वा मलेसियन नागरिक यीले भनेका छन्, उनीहरुलाई खुल्ला
भुजेलको साढे २ करोड उप`चार खर्च साउदीको एक अपस्ताल द्वारा मिनाहा ।
एजेन्सी : मोरङ हरैँचाका बेद`बहादुर भुजेलको उप`चारमा खर्च भएको साढे दुई करोड रुपैयाँ सा`उदीको एक अस्पता`लले मिनाहा गरिदिएको छ । उप`चार खर्च तिर्न नसकेर साउदीस्थित नेपाली दूता`वासको सेल्टरमा अढाई वर्षदेखि रहँदै आएका भुजेलको उपचा`ररत खर्च अस्प`तालले मिनाहा गरिदि`एको हो । उपचार खर्च मिनाहा भए`सँगै उनी बिहीबार नेपाल आइ`पुगेका छन् । साउदीमा रहेको नेपाली दूता`वासका अनुसा`र वैदेशिक रो`जगारीको सिल`सिलामा साउदीको रियादमा एउटा कम्पनीमा काम गर्दागर्दै साढे दुई वर्ष पहिले भुजेल दुर्घ`टनामा परेका थिए । दुर्घ`टनामा परेर तीन महिना उनी अचेत अवस्था`मा थिए । ‘फ्यामिली केयर हस्पिटल’मा नियमित उपचा`रपछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको थियो । तर उपचार खर्च तिर्न नसक्दा उनीवि`रुद्ध अस्पतालले मु`द्दा हालेको थियो । दूतावा`सका अनुसार लामो समय`सम्म अस्पता`लको बसाइ र उप`चार गरेर भुजेलको खर्च आठ लाख साउदी र
डीभी परेर अमेरिका पुगेका नेपाली मूलका ओलीको मृ’त्यु !
काठमाडौं : डीभी चिट्ठाबाट अमेरिका पुगेका नेपाली मूलका भरतराज ओलीको अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइना राज्यमा म’स्तिष्क श्रा’वबाट ज्या'न गएको छ । गत जून ४ का दिन म’स्तिकघा’त भएपछि उनलाई ड्युक विश्वविद्यालय अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । ३४ वर्षीय ओलीलाई बचाउन श’ल्यक्रि’या गरेता पनि उप'चारकै क्रममा उनको आइतबार मृ’त्यु भएको हो । ओली सन् २०१० मा वि’विधता प्र'वेशाज्ञा चिट्ठा (ईडिभी भिसा) मार्फत अमेरिका पुगेका थिए । उनी दाङ्गका हुन् । नेपालमा उनका आमा, पत्नी, २ वर्षका छोरा र दुई दिदीबहिनी छन् । नेपाल सेन्टर अफ नर्थ क्या’रोलिनाका अनुसार ओली परिवारमा आयआर्जन गर्ने उनी एक मात्र सदस्य थिए ।उत्तर क्या’रोलाइनाको सामुदायिक संस्था नेपाल सेन्टर अफ नर्थ क्या’रोलिनाको पहलमा उनको अ’न्त्ये’ष्टि खर्च जुटाउन गो फण्ड सञ्चालनमा ल्या’इएको छ । संस्थाले मृ’तक ओलीको दा’ह सं’स्कार तथा नेपालमा रहेका परिवारका लाग
उडान ब’न्द हुँदा मलेसियामा मात्रै ३५ नेपालीको श’व अ-ड्कियो !
क्वालालम्पुर : अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा मलेसियामा ३५ नेपालीको श’व अ’ड्किएको छ ।सरकारले को'रोना स'ङ्क्रमण रोक'थामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान ब’न्द गरेको एक महिनाको अव'धिमा मलेसियामा मात्रै लगभग ३५ नेपालीको श’व रोकिएको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार घर करार, भिसा सकाएर नेपाल फर्कन खोज्ने नेपालीको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । नेपालले उडान ब'न्द गरेपछि करार सकिएर घर फर्कन खोज्नेहरू मात्रै लगभग एक हजार जना रहेको राजदूत पाण्डेले बताउनुभयो ।मलेसियामा विभिन्न कारणले जे’ल परेका र जेलको समयावधि सकेर ६५ जना नेपाली घर फर्कने दिन कुरिरहेका छन् । मलेसियामा गएको वर्षजस्तो रोजगारी गु’मेर अ'लपत्र पर्ने अवस्था अहिले छैन । क’रार सकिएर घर फर्कने तयारीमा रहेकाहरूलाई कम्पनीले नै खान र बस्ने व्यवस्था गरिरहेको छ । 'पनि पछिल्लो समय को’रोना सङ्क्रमण
Jun82021 by Yuwa AawajNo Comments
बैंकमा पैसा लिन पुग्यो ला’श, कर्म’चारीको गयो सातो !
एजेन्सी : भारतको बिहार राज्यको पट’नामा एक बैंकमा एउटा ला’श आफ्नो पैसा लिन पुग्यो । बैंकमा उसलाई देखेर कर्म’चारीको सातो गयो । पटनाछेउको शाहज’हाँपुर थाना क्षेत्रको सिगरि’यावांमा केनरा बैंकको शाखामा लाश पैसा लिन पुगेको हो । यहाँका महेश यादवको मंगलबार बिहान मृ’त्यु भएको थियो । मृ’त्यु’पछि गाउँलेहरुले अन्तिम सं'स्कार’को लागि बैंकमा गएर उनको खातामा भएको पैसा बैंकका कर्मचारी’सँग मागे तर बैंक म्यानेजरले पैसा दिन मानेनन् । यो कुराले रिसाएका गाउँलेले यादवको ला’श लिएर बैंकमा पुगे र ला’शलाई बैंकभित्र राखिदिए । लगभग ३ घण्टासम्म बैंक’मा महेशको ला’श त्यत्तिकै रह्यो ।गाउँलेहरु पैसा नलिइ मान्न तयार थिएनन् । अन्ततः म्याने’जरले आफ्नै १० हजार रुपैयाँ गाउँलेलाई दिएर विवा’द सुल्झाए । पैसा पाएपछि गाउँलेहरुले महेशको ला’श लिएर अन्तिम संस्का'र’को लागि गए । खासमा महेशको बिहे भएको थिएन र उनको परिवारमा पनि
Jun72021 by Yuwa AawajNo Comments
पाकिस्तानमा २ रेलबीच प्रति’स्पर्धा हुँदा झन्डै ३० जनाको मृ’त्यु, ५० घा’इते ।
मुल्तान : पाकिस्तानको द'क्षिणी क्षेत्रमा सोमबार बिहानै दुई वटा एक्स'प्रेस रेल जुधेर भएको दु'र्घटनामा कम्तीमा ३० जना यात्रुको मृ'त्यु भएको छ । स्थानीय अधिकारीहरुका अनुसार उद्धा'रकर्मी एवं स्थानीय गाउँबासीले रेलका ड'ब्बामा च्या'पिएका घा'इते एवं मृत'कका श'व बाहिर निकालेका छन् । मिल्लात एक्स'प्रेस रेलका डब्बाभित्र अझै पनि १५ देखि २० जना यात्रु फसेका बताइएको छ । सिन्ध प्रान्तको घो'ट्की जिल्लाका प्रह'री प्रमुख उमर टुफै'लले डब्बाभित्र थु'निएका व्यक्तिहरु उ'द्धारका लागि चि'च्याएको सुनिएको बताउँदै ठूला मेसिनको सहायताले भग्ना'वशेष पन्छाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । मिल्लात एक्स'प्रेस रेल आफ्नो लिकबाट बा'हिरिएसँगै सर सइद एक्स'प्रेस रेलले ठ'क्कर दिएको थियो, घो'टकीका उपआयुक्त उस्मान अब्दु'ल्लाहले बताए । उनले मिल्लात रेल कसरी लिकबाहिर उछिट्टियो भन्ने बारेमा अनु'सन्धान शुरु भएको जान'कारी दिए
यती धेरै खुसी रमेश प्रसाई र नन्दा को छोरोको आगमन बधाई नदिनेलाई यस्तो सन्देश । (14857)
खुशीको खबर : नेपालमा आज ह्वात्तै घटे को’रोना संक्र-मित ।(संख्या सहित) (5161)
१. यती धेरै खुसी रमेश प्रसाई र नन्दा को छोरोको आगमन बधाई नदिनेलाई यस्तो सन्देश । (14857)
२. आमालाई मा’र्न भिरको टुप्पोमा पु’र्याएपछि आमाले भनिन् :छोरा तिमी फर्कने बाटो अफ्ठे’रो छ, नलडी जानु है ! (3198)
३. असारदेखि के-के खुल्छ, के खुल्दैन ? यस्ताे छ सरकारकाे तयारी ! (2159)
६. धेरैवर्ष पहिले बिजय कुमारले यसरी खेलिरहेको भेट्टाएका थिए रमेश प्रसाईंलाई । (भिडियो सहित) (1122)
७. के मास्क धोएर लाउन मिल्छ ? दिनदिनै फेर्नुपर्छ कि एउटै लगाइरहे हुन्छ ? तपाई पनि थाहा पाउनुहोस । (1094)
८. माउन्ट भ्यू इंगलिस स्कूलका सस्थापक प्रिन्सिपल राजकुमार महर्जनको नि’धन ! (1066)